Date My Pet » 6 Antony Nahoana Tsara Health no tsara Fifandraisana
Ralph Waldo Emerson indray mandeha voalaza, "Fahasalamana no harena lehibe indrindra."
Fa indrisy, maro loatra amintsika no miasa amin'ny "fahampiam."
Manome tsiny azy amin'ny solosaina ary mipetrapetraka kokoa ny fomba fiainana; hanaram-po amin'ny sakafo haingana trano fisakafoanana noho ny somebiseby erỳ fandaharam-potoanany; na fotsiny ny tsy fahampian'ny fanentanana momba ny fanao ara-pahasalamana.
Diniho ny antontan'isa manaraka:
Araka ny CNN.COM, matavy loatra amin'ny olon-dehibe any Amerika Nitombo avo roa heny teo 1990 ary 2010.
Isan-taona ny vola lany amin'ny fikarakarana ara-pitsaboana matavy loatra mihoatra $140 arivo tapitrisa.
Ny Foiben'ny Miady Amin'ny Aretina dia mitatitra fa ny fifohana sigara dia miteraka mihoatra noho ny 480,000 maty isan-taona any amin'ny U.S.
Ny fifohana sigara no antony mitarika aloha loatra ny fahafatesana.
Fihoaran'ny lanja sy matavy loatra dia mety ho mety mahatonga ny aretina sy ny fampivelarana sasany aretina toy ny: aretim-po, Type 2 diabeta, kansera sasany sy ny fiakaran'ny tosi-drà.
Fa, misy vaovao tsara. Na dia tsy afaka mifehy manaranaka foana lafin-javatra, lahatra, na mifanentana ny sôkôla, misy ny sasany mpikambana mazoto fepetra azontsika atao mba manome ho an'ny fahasalamana tsara kokoa.
Toy izao ny antony tokony...
1. Fahasalamana tsara mamela antsika hiaina tsara fifandraisana. Ny tsara kokoa isika, mahatsapa, ny tsara kokoa ny moods, (matetika), izay mahatonga antsika ho mahafinaritra kokoa manodidina sy mifandray amin'ny. Efa nisy fotoana ve ianao manodidina ny olona mandrakariva mitaraina momba ny harary sy ny fanaintainana? Na iza snaps anao satria sorena foana? Dia azo antoka fa afaka mametraka ny damper eo amin'ny lafin-javatra mahafinaritra.
2. Ny fahasalamana tsara kokoa mahatonga ny tanjaka, hery, sy ny heriny. Mamela antsika hanao zavatra ara-batana tsy misy fepetra sy ny fetran'ny mety ho vitantsika.
3. Fahasalamana tsara mamela antsika ho tsy miankina, fa tsy mitaky hafa (na ny anton-javatra ivelany) mba hanome ho an'ny fikarakarana isan'andro; izany dia maneho fiheverana ireo izay miahy.
4. Salama tsara dia manome bebe kokoa ho ela velona sy ho tsara kokoa ny fiainana.
5. Fahasalamana tsara mamonjy vola. Marina izany. Afaka misakana fanafody lafo vidy, ny amin'izay ho lany ny fitsidihana tsy tapaka ny dokotera, ary piantohana avo premiums.
6. Manatsara ny fahasalamana tsara tarehy. Diniho ny ankizivavy be voninahitra hoditra, ny Stud mbamin'ny enin-fonosana, ary ireo tarehimarika tsara tarehy izay mamela azy ireo mba hijery mahatahotra Na izany na tsy fitafiany izy ireo akanjo. "Raha mijery tsara, tsara ianao. "
Miaraka amin'izany ao an-tsaina, eto dia tsotra vitsivitsy, soso-kevitra haingana, fiantraikany maharitra ela sy tandrify ny fahasalamana.
Raiso dingana kely. Toy ny maro hafa koa no fiainana, fomba tsikelikely no tsara indrindra. Atombohy ny mandany kokoa voankazo sy legioma isan-andro sy ny mihinana araka ny antonony.
Raha mifoka sigara, niala.
Tsy tia fanatanjahan-tena? Diniho fomba hafa. Ohatra, Tiako ny dihy. Fantatrao ve fa ny dihy ihany koa ny fomba mahafinaritra handoro kaloria ary hijanona ho matanjaka? Diniho maka ny Zumba kilasy ao amin'ny faritra misy. Na angamba Bowling na filomanosana ho bebe kokoa ny eritreritsika. Misy zavatra tsara kokoa noho na inona na inona.
Misotroa rano bebe kokoa. Fa tsara ho an'ny hoditra ary flushes avy loto.
Get sahaza sasatra. Manam-pahaizana manokana mikasika ny fahazoan-dalana adiny valo isan'alina.
Manana biby. Fanadihadiana ara-pahasalamana fa ny fananana fahasalamana iray manome tombontsoa isan-karazany, ary manome ny fahatsapana ny namana.
Ny fanomezana lehibe indrindra azonao omena ny tenanao sy ny namanao dia ny fahasalamana– ara-tsaina, pihetseham-po sy ara-batana.
Fanamarihana: Io fanazavan io dia tsy natao mba hanolo ny toro-hevitra ara-pahasalamana avy amin'ny fitsaboana matihanina. Hevitra ny dokotera raha azo atao.